Amaklayenti ethu & Testimonial - Electronics Design Ukukhiqiza
Thina obakhathalelayo amaklayenti ethu ukuze kugcinwe eside run ngokubambisana nabo athole imiphumela emihle zonke izigaba uhambo umkhiqizo.
Amakhasimende ethu avela afanayo ezibanzi izimboni. Abanye ayoliswe ubuchwepheshe noma impahla esithambile izinkampani kuyilapho abanye zifiki ihadiwe nobuchwepheshe. Sisebenzisa ubunjiniyela wethu onqala, ukuthuthukiswa, ukukhiqizo nokusakazwa isipiliyoni ukubasiza nokwandisa nesithembiso sabo brand.
Buyekeza: “Siye sasebenzisa Moko kwabanye izidingo kakhulu eziyinkimbinkimbi futhi kuyakhandla PCB isakhiwo. Ukusebenza ezindaweni nokhahlo silondoloza esiqinile Isilawuli ukumisa inqubo kuwo wonke PCB yethu imiklamo. Moko Technology Ltd kwaba professional ngokwedlulele futhi kwadingeka eziningi isipiliyoni okwasisiza akhiqize amakhadi ngesikhathi futhi isabelomali”.
Buyekeza: “Excellent kwamakhasimende at Moko Technology Ltd yilokho okugcina kimi esabuya. Njengenjwayelo, ngiyabonga kakhulu ngosizo lwakho. Izimpendulo zakho okusheshayo zihlale eziwusizo ngempela, kanye enhle kakhulu kwamakhasimende at Moko yilokho okugcina kimi esabuya”.
Buyekeza: “Yonke inqubo isakhiwo kusuka ekuqaleni kuya ekugcineni kwaba smooth kakhulu. Black Stick kwamenelisa kakhulu ukusebenza esizikhethayo PCB design iphakethe okwasiza uma kuziwa izinguquko kwendikimba axoshwa PCB sakhiwo.”
Buyekeza: “Moko uzoqalisa ukusebenza uchungechunge scan ngesikhathi sesigaba design layout ukukhulisa isivivinyo Ukusabalala. Siphinde ukuthuthukisa uhlelo test, BIST futhi ukuhlolwa zalapho ukuyohlolwa iphutha sibonelo ababebuthene, ngaleyo ndlela ukuqinisekisa ukulethwa isethi prototype okungukuthi buvivinywe ngokugcwele futhi ukulungele amandla i-nokuhlola ukusebenza.”
Buyekeza: “okuhle kakhulu ubunjiniyela Embedded kanye umkhiqizo PCB, zingabantu ochwepheshe. Siyajabula kakhulu nge PCB design kanye umkhiqizo ezihlinzekwa Moko. inkonzo Super okusheshayo! Moko inkonzo izimbangi abakhiqizi PCB lapha U.S. I-intanethi isimo real-time wasivumela ukuba ukuqapha inqubo ukukhiqizwa.
Buyekeza: ” Ukube kwakungengenxa ukuze asekele esifike Moko iqembu, inkampani yami bebengeke bakwazi ukukhiqiza enjalo kulayini nezinsiza zokuxhumana. Ngithanda ukubonga kubo usizo lwabo kanye nokwesekwa, futhi kwakubasiza ngempela bathanda ukuncoma kubo kwengisebenza. “